Suudhadhku waa Dayrta | Ragga Stylish
Lucas garcia | | nololeedka, Waqtiyada firaaqada
Dayrta ayaa halkan taal, oo iyada ayaan ku bilaabaynaa inaan ka fikirno funaanadaha, funaanadaha, jaakadaha…. oo maxaa diidaya suud? Deyrta 2015-ka waxaa ka buuxa isbeddello ku habboon dharka maxaa yeelay dhadhaminta midabada, sidaas darteed waxaan ka helaynaa kala-goynno iyo naqshado kala duwan, sida noocyada midabyada oo dhan si aan u dooranno midka nagu habboon.
In kasta oo midabada sida buluugga ama buluugga buluugga ahi ay weli yihiin boqorooyinka markay tahay dacwadaha, bunni iyo beigis ayaa u soo dhowaanaya in laga qaado caannimada.
Sida jeexjeexyada, waxaan ka helnaa dabaqadaha, blazers-ka la rakibay, ama seddex qaybood oo isku dhejisan oo ay ku jiraan jaakad sida dhammaystirka ugu fiican ee isku xidhka curlka.
1 Noocee noocee ah ayaan heli karnaa?
1.1 Isku dhafan
1.2 Buluug dhammaan noocyadiisa
1.3 Cawl, waa waajib xilligan
1.4 Maariin iyo beige
Noocee noocee ah ayaan heli karnaa?
Haddii aad rabto ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo bilaash ah oo aan caadi ahayn, shaki la'aan, dooro isku-darka isku-dhafan, way ka yar yihiin rasmi ahaan waxayna ku habboon yihiin maalin xafiiska sida soo-jeedinta etym, Zara ama Isaga oo leh Mango.
Halka aan sidoo kale ku dhiiran karno inaan ku darno midabada surwaal iyo blazer oo aan ku darno foulard taas oo siinaysa taabashada midabka.
Maxaa loogu dari waayey funaanada?
Buluug dhammaan noocyadiisa
Buluug waa isbeddel xilliga jiilaalka xilliga deyrta 2015-2016. Saxeexyada sida etym, Isagu by Mango o ZaraWaxay doortaan nooc kasta oo isku dhafan oo midab leh, si aad adigu u doorato suud caadi ah oo loogu talagalay munaasabad gaar ah, ama wax aad ugu dhiiranaya sida "caato la'aanta" cut oo aad moodo.
Haddii aad raadineysid midab kale oo buluug ah, midabkaagu waa buluug koronto, oo ah isbeddelkan Dayrta 2015.
Cawl, waa waajib xilligan
Waa midab soo noqnoqda oo ku habboon Duufaantaan, wax muhiim u ah ayaa ah in la doorto suudhadhka cawlan ee leh naaso labalaab ah, oo aad si fiican isugu darto funaanado, funaanado ama funaanado, mala awaal awood.
Maariin iyo beige
Maariin iyo beige waa midabbo kale oo lagu soo rogay Dayrtaan. Noocyada sida Zara, Cortefiel, He by Mango ama ASOS ayaa sharad ku galaya wax kale oo badan si looga baxo howlaha maalinlaha ah. Waxaan ka heli karnaa googoyn caadi ah, ama laba jibbaaran, ama jaritaan dhuuban oo dheeri ah.
Soo jeedin noocee ah ayaad doorbideysaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Suudhadhku waa Dayrta
Saddex siyaabood oo loo xirto beanie boorso leh